DFU-mode okukhethwa kukho lapho ungavula iPhone yakho ibe ukucushwa lapho uzokwazi uxhumane iTunes, kodwa ngesikhathi esifanayo ngeke ivuleke uhlelo lwayo lokusebenza noma ukuqalisa Loader (yilokho usetha ngempela le ndlela mode alulame). Singasho ukuthi umnyango ke ibuyekeza firmware.
Yini evame ukusetshenziswa DFU-mode?
Isizathu esiyinhloko ukuthi abantu badinga ukuhambisa kumodi DFU kuselula yakho isidingo sokushintsha firmware kudivayisi. Lokhu kungenzeka ngenxa yezizathu eziningi: isidingo sokubuyela iPhone uhlelo olusebenzisayo yayo esimweni sangaphambilini, noma usebenzise firmware ngokwezifiso, okuyinto kudingeka jailbreak noma ukuvula i-SIM. Ngokwesibonelo, uma ifakiwe iPhone OS version entsha, bese unquma ukuthi uthanda lowo odlule, udinga ukusetha kabusha ukufakwa entsha ngokusebenzisa imodi DFU.
Indlela ukungena DFU-mode ku-iPhone?
Xhuma iPhone yakho kwikhompyutha bese uqalise iTunes. Vala smartphone yakho (ubambe inkinobho amandla phezu cell). Cindezela bese ubamba inkinobho amandla Lala kanyekanye ne-Home ncamashi 10 imizuzwana, bese ukukhulula lokuqala. Qhubeka nokubamba sasekhaya, kuyilapho iTunes akulona umyalezo wokuthi iPhone yakho ikwimodi yokutakula kutholakele.
Uma ufaka imodi DFU, isikrini iPhone kuyoba black ngokuphelele.
Ngisho naphezu kweqiniso lokuthi isikrini amnyama, akusho ukuthi divayisi ayikwazi izithombe ezinemibala ezazihambisana nekhasethi iTunes noma nezinye izinsiza (i jailbreak nokunye. D.).
Khumbula, uma ubona iTunes logo, mfana ekubuyiselweni noma yimuphi umlayezo esikrinini iPhone, ungeyena kwimodi DFU. Kunalokho, ugijima ejwayelekile mode alulame. Nalapha futhi, DFU-mode kunqunywa kuphela ngokuphelele black screen kule divayisi. Uma noma yini enye kwenzeka, ukuphinda izinyathelo ezingenhla uze iyothathwa imodi eshiwo ngempumelelo.
Out imodi DFU kuselula
Indlela elula ukuphuma imodi DFU ubambe zasekhaya Ukulala / izivulekele uma uxhuma iTunes. Khona-ke nje ucindezela inkinobho amandla futhi kufanele kabusha idivayisi evamile.
Yini abasebenzisi unesithakazelo ukuthi bahumushe kumodi DFU igajethi yakho?
Isizathu ezijwayeleke kakhulu ukusebenzisa imodi DFU yidivayisi jailbreak. Namuhla-ke akuyona into engavamile phakathi abasebenzisi - ukuthenga iPhone entsha, futhi ukuthola indlela ukukhulula idivayisi kusukela imingcele ukusetshenziswa kunethiwekhi efanayo noma phesheya. Ngokuvamile lokhu kungenxa yokuthi abantu bakufuna indlela eshibhe ukuthenga i-iPhone futhi akanandaba asayine isivumelwano nanoma yimuphi opharetha ethile esikhathini eside. Ngokwemvelo, iningi ngedivayisi abasebenzisi engafuni overpay ngoba kuzula noma ngokushesha akhokhe izindleko egcwele umdayisi iPhone. Ngamanye amazwi, kungenzeka eziningi izizathu, kodwa zonke ubilise phansi into eyodwa - isifiso ukulondoloza bese benzuzo ngezindleko ubuncane.
Kumele kuqashelwe ukuthi le mfundo ngenhla isebenza hhayi kuphela maqondana iPhone. Ngokufanayo, ungakwazi ufake noma iyiphi "apula" kudivayisi kule modi, ngoba izilungiselelo ifektri ayafana yini.
Inhlanganisela Irreplaceable Alt F4
Ping - kuyini? Ping Umbuso indawo. Ping Server
Kanjani ukwenza zangemuva "Photoshop"? isizinda Elihle "Photoshop". Indlela ukufaka zangemuva "Photoshop"?
Endaweni amanethiwekhi computer kanye nomklamo yabo nefilosofi
Wireless ukukhanya switch: Izici ukufakwa
LwesiNavajo Cove. A iyipharadesi kubathandi
Dress-tulip: imfashini, ewusizo, enhle!
Zonke ukhathele futhi engafuni ukusebenza, yini okufanele uyenze?
"Articaine INIBSA": yokusetshenziswa, incazelo, ukwakheka kanye nokubuyekeza
Deytsvennye amathiphu kanye zokupheka for buso ebusweni ekhaya
Newborn: indlela yabo yokukhuluma. Inguqulo yohlelo yokubiza amagama
Ukuhlaziywa kwe-"Goy wena, Russ, othandekayo wami," Esenin S. A.